Maxaad is leedahay shaqo ahaan wuu qaban lahaa Pepe hadii uusan kubada cagta xifrad ka dhigan lahayn? Isaga ayaa jawaabta haya….. – Gool FM
Maxaad is leedahay shaqo ahaan wuu qaban lahaa Pepe hadii uusan kubada cagta xifrad ka dhigan lahayn? Isaga ayaa jawaabta haya…..
Kaafi May 13, 2016
(Madrid) 13 Maajo 2016. Ma jiraan ciyaaryahano badan oo quwad jireed leh marna laga baqo kolna la jecleysto sida Pepe marka la eego kubadda cagta dunida.
Laakiin banaanka garoonka, daafaca dhexe ee Real Madrid waa mid ka mida dadka ugu wanaagsan ee aad la kulmi karto.
Daaficii hore ee Porto waxa uu gurigiisa ka dhigtay Bernabeu – waxa uu sheegay In uusan dhaafsan doonin Premier League.
Isaga oo la hadlaya SOCCER AM, Pepe waxa uu yiri: “Waxaan qabaa in qaab ciyaareedkeyga looga mahadin lahaa England, laakiin dheesha Spian waa mid u badan farsamo, meshii ay ahaan lahayd mid u dhexeysa labada xero ganaax sida kubadda cagta ee Ingiriiska, waxaa in badan laga shekeeyaa qaab ciyaareedkeyga xooga ah.
“England, waxaa ku badan in la is taamto inta ciyaarta socoto”.
Mar la weydiiyey in uu jeclan lahaa ku soo biirida England, 33 jirka wuu qoslay: “Halkan ayaan aad ugu faraxsanahay! Dadki wey I jecel yihiin.
“Waan jeclahay kooxda maxaa yeelay waqtiyo badan oo cajiib ah ayaan ka helay.“
“Waxaan qabaa in aad u baahan tahay kala saarida waxa ka dhaca gudaha garoonka iyo banaanka.
“Ma jecli in aan lumiyey kubadd si siman uu dhextaal qof iga soo horjeeda 50/50, waa isla sida uusan weeraryahanka u jecleyn luminta fursadaha.”
Pepe waxa uu Real Madrid uga soo biiray Porto sanadii 2007 waxa uuna u saftay wax ka badan 200 oo kulan.
Waxa uu ku guuleystay laba La Liga, laba Copa del Rey, Super Cup, Champions League, FIFA Club World Cup xilligaas intii u dhexeeysay – mana rabin in uu meel kale joogo.
Waxa uu sharaxay: “Madrid waa cajiib, waxaa yaal wax waliba oo uu qof u baahdo. Baarar wanaagsan, dad fiican oo muxubo leh, ma aha oo kaliya kuwa ka soo jeeda Madrid balse Spain oo dhan.
“Waxaan qabaa on Real Madrid ay mar waliba tahay koox xoog badan. Wax wacan ayaan sameeneynaa., maskaxiyan waan xoog badanahay waxaana rabnaa in aan gaarno hadafkeena inta ka harsan ololaha.
“Waxaan qabaa in ay adkaan doonto laakiin diyaar ayaan u nahay.”
Tan iyo markii Zinedine Zidane uu xilka Bernabeu la wareegay, Madrid waxa ay ka soo kacday hurdadii ay ku jirtay bartamihii xilli ciyaareedka iyada oo hada meel waliba dagaal ugu jirta.
Waxa ay ku qasban yihiin in ay garaacaan Deportivo sabtida iyaga oo rajeynaya in Barcelona ku simbiriirixato Granada si ay ugu guuleystaan La Liga.
Laakiin waxa ay fiinaalaha Champions League ku wajahayaan Atletico Madrid, Pepe waxa uu yiri imaanshaha kama dambeysta in uu leeyahay tababaraha.
Pepe waxa uu yiri: “Waa tababare shaqo adag qabta, aad ayuu u asluub badan yahay waxaana u cad waxa uu rabo in garoonla laga sameeyo aragtiyo ahaan. Waxaan qabaa in uu halkan Madrid tababare ka ahaan karo sanado aad u badan.
“Waxa uu jecelyahay kubadda cagta, wuu ku nool yahay, aqoon cajiib ah ayuu u leeyahay, mustaqbal ifaya oo tababarenimo ayaa ka horeeya.
“Waxaan qabaa in dhab ahaantii uu ka mid noqon doono tababareyaasha ugu wanaagsan dunida.”
Daafaca maalaa yacniga diidka ah ayaa la yaabkii wareysiga dib u dhigay waxa uusheegay in uu ahaan lahaa darawal hadii xirfada kubadda cagta aysan u ahayn.
Pepe waxa uu daaha ka rogay: “Hadii aan kubadd ciyaare ahayn, waxaan xaqiiqdii ahaan lahaa darawal maxaa yeelay waa xirfada aabahay waana shaqsi aan ku daydo oo aan jeclahay. Waxaan rabay in aan raadkiisa raaco.”
DEG DEG: Zlatan Ibrahimovic oo shaaciyay inuu isaga tagi doono PSG
Arsenal oo mushaar qaali ah faraqa ugu shubi doonta Mesut Ozil haddii uu saxiixo heshiis cusub